द डेली मेलका अनुसार ट्विटरका सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको संख्या मासिक ३ करोड ३० लाख छ । द डेली मेलले सन् २०१८ मा ट्विटरमा सबैभन्दा बढी फलोअर्स भएका व्यक्तिहरूका बारेमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो ।
1. केटी पेरी @katyperry
सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी ट्विटर फलोअर्स भएकी सेलिब्रेटी हुन्, क्यालिफोर्नियाकि केटी पेरी । ३४ वर्षीया पेरी अमेरिकी गायिका, गीतकार तथा टेलिभिजन पर्सनालिटी हुन् । पप एवं रक विधाका गीत गाउने पेरीले केही चलचित्रमा अभिनयसमेत गरेकी छिन् । सन् २०१७ मा १ करोड फलोअर्स पु¥याउने पनि उनै थिइन् । केटीले १० वर्षअघिदेखि ट्विटर चलाउन थालेकी हुन् ।
2. जस्टिन बिबर @justinbieber
क्यानेडियन गायक तथा गीतकार जस्टिन बिबर दोस्रो सबैभन्दा बढी फलोअर्स भएका व्यक्ति हुन् । लण्डनमा जन्मिएका २४ वर्षीय बिबर क्यानाडाको ओन्टारियोमा बस्छन् । उनी परिवारका एक्ला सन्तान हुन् । उनका गीत संसारभर प्रख्यात छन् । उनको युट्युब च्यानललार्ई ४ करोड, २४ लाख ७५ हजार ३ सय ६७ जनाले सब्सक्राइब गरेका छन् । यसबाट पनि उनको लोकप्रियता कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
3. बाराक ओबामा @BarackObama
बाराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्म अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए । पहिलो अफ्रिकन अमेरिकी राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएका ओबामा हवाईमा जन्मिएका हुन् । कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट ग्राजुएसन गरेका अमेरिकाका ४४ औं राष्ट्रपति ओबामा युनिभर्सिटी अफ सिकागो ल स्कुलमा संवैधानिक कानुन पढाउ“थे । सन् २०१७ मा उनको ट्विटले संसारमा सबैभन्दा बढी लाइक्स पाएको थियो भने संसारमा सबैभन्दा बढी रिट्विट हुनेमा दोस्रो भएको थियो । संसारमा सबैभन्दा बढी फलोअर्स भएका १० व्यक्तिमध्ये उनी तेस्रो स्थानमा छन् ।
4. रिहाना @rihanna
रिहानाका थुपै्र परिचय छन् । उनी गयिका, ब्यापारी, नायिका, डान्सर, गीतकार तथा कूटनीतिज्ञ हुन् । ३० वर्षीया रिहानाले पप, रेगी तथा हिपहप गीतमा स्वर भरेकी छिन् । उनले विभिन्न सौन्दर्य उत्पादनहरूमा मोडलिङसमेत गरेकी छिन् । उनी च्यारिटी शोका काममा समेत सक्रिय छिन् । रिहाना ट्विटरमा तस्बिर तथा भिडियोहरू पोस्ट गर्छिन् ।
फलोअर्स ८,८५,४५, ८४९
टेलर स्विफ्ट अमेरिकी गायिका हुन् । सबैभन्दा कम उमेरकी गीतकारका रूपमा परिचय बनाएपछि टेलरलाई सोनी, एटिभी म्युजिक हाउसले जागिर दिएको थियो । उनी निर्माता तथा अभिनेत्री समेत हुन् । टेलर युट्युबमा पनि सक्रिय छिन् । उनको आफ्नै च्यानल टेलर स्विफ्टलाई ३ करोड, १८ लाख १६ हजार ८३ जनाले सब्सक्राइब गरेका छन् ।
6. एलन डिजनरस @TheEllenShow
एलन डिजनरस अमेरिकी कमेडियन, टेलिभिजन प्रस्तोता, अभिनेत्री, लेखक, कार्यक्रम उत्पादक हुन् । ६० वर्षीया एलनका सिरियस्ली आइएम किडिङ, द फन्नी थिङ्स इज्, माइ प्वाइन्ट एण्ड आइ डु ह्याभ वन आदि पुस्तक प्रकाशित छन् ।
7. लेडी गागा @ladygaga
लेडी गागा अमेरिकी गायिका, नायिक तथा गीतकार हुन् । ३२ वर्षीया गागा सुरुवातमा थियटरमा काम गर्थिन् । उनले आफ्ना स्टेज कार्यक्रमका छोटा भिडियो तथा तस्बिर पोस्ट गर्छिन् । उनका ए स्टार इज बर्न, आर्टपप, दे फेम जस्ता एल्बमहरू चर्चित छन् ।
8. क्रिस्टियानो रोनाल्डो @Cristiano
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगिज ब्यबसायिक फुटबलर हुन् । उनी स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिड तथा पोर्चुगल नेसनल टिमका लागि खेल्छन् । पोर्चुगलका लागि उनी क्याप्टेन नै थिए । ३३ वर्षीय रोनाल्डो एक मात्र त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसको ट्विटरमा सबैभन्दा बढी फलोअर्स छन् ।
9. जस्टिन टिम्बरलेक @jtimberlake
जस्टिन टिम्बरलेक अमेरिकी अभिनेता, डान्सर, रेकर्ड प्रोड्युसर, व्यापारी तथा गायक हुन् । कलिलै उमेरमा उनी म्युजिक ब्यान्डमा आबद्ध हुन पुगे । उनले ट्विटरमा बढीजसो बिभिन्न थिमका भिडियो अपलोड गर्छन् भने कहिलेकाहीं आफ्ना तस्बिर पोस्ट गर्छन् ।
10. .किम कार्डासियन वेस्ट @kimkardashian
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा जन्मिएकी किम कार्डासियन वेस्ट अमेरिकन रियालिटी टेलिभिजन पर्सनालिटी हुन् । ३८ वर्षीया किम उद्यमीसमेत हुन् । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्ने किमका इन्स्टाग्रँम फलोअर पनि प्रशस्तै छन् । उनको कम्पनिले विभिन्न किसिमका पहिरन उत्पादन गर्छ ।
फलोअर्स— ५,९०,०९ ,५५८